Antso maika ho an'ny firenena OECD ny WTN mba hanonerana ny indostrian'ny fizahantany afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Antso maika ho an'ny firenena OECD ny WTN mba hanonerana ny indostrian'ny fizahantany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ny Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dia fikambanana iraisam-pirenena miasa amin'ny fananganana politika tsaratsara kokoa fiainana tsara kokoa. Ny tanjona dia ny hamolavola politika mampandroso ny fanambinana, ny fitovian-jo, ny fahafaha-manao ary ny filaminan'ny rehetra.
Miaraka amin'ny governemanta, mpanao politika ary olom-pirenena, ny OECD dia miasa amin'ny fametrahana fenitra iraisam-pirenena mifototra amin'ny porofo sy fitadiavana vahaolana amin'ireo fanamby ara-tsosialy, toekarena ary tontolo iainana. Avy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny toe-karena sy ny famoronana asa, hatramin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana matanjaka sy ny ady amin'ny fandosirana hetra iraisam-pirenena, ny OECD dia manome sehatra tsy manam-paharoa sy ivon'ny fahalalana ho an'ny angona sy fanadihadiana, fifanakalozana traikefa, fifampizaràna fanao tsara indrindra ary torohevitra momba ny politikan'ny daholobe sy ny fenitra iraisam-pirenena. .
Ny OECD no fototry ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Ny firenena mpikambana dia miara-miasa amin'ny firenena hafa, fikambanana ary mpandray anjara maneran-tany mba hamahana ireo fanamby ara-politika amin'izao fotoana izao.
Ny Organisation for Economic Cooperation and Development dia fikambanana ara-toekarena iraisan'ny governemanta miaraka amin'ny firenena mpikambana 38, naorina tamin'ny 1961 mba hamporisihana ny fandrosoana ara-toekarena sy ny varotra eran-tany.
Ireto firenena manaraka ireto no mpikambana ao amin'ny OECD amin'izao fotoana izao:
AOSTRALIA 7 Jona 1971
AOTRISY 29 Septambra 1961
BELZIKA 13 Septambra 1961
KANADA 10 Aprily 1961
SILIA 7 May 2010
KOLOMBIA 28 Aprily 2020
REPOBLIKA TCHEKY 21 Desambra 1995
DANEMARK 30 May 1961
ESTONIA 9 Desambra 2010
FAILANDY 28 Janoary 1969
FRANCE 7 Aogositra 1961
ALEMAINA 27 Septambra 1961
GRESY 27 Septambra 1961
HONGRIA 7 May 1996
IRLANDY 5 Jona 1961
IRLANDY 17 Aogositra 1961
ISRAELY 7 Septambra 2010
ITALIA 29 March 1962
JAPON 28 Aprily 1964
KOREA 12 Desambra 1996
LETONIA 1 Jolay 2016
LITOANIA 5 Jolay 2018
LUXEMBOURG 7 Desambra 1961
HOLANDY 13 Novambra 1961
NOVELY ZELANDY 29 May 1973
NORVEZY 4 Jolay 1961
POLONINA 22 Novambra 1996
PORTOGALY 4 Aogositra 1961
REPOBLIKA SLOVAK 14 Desambra 2000
SLOVENIA 21 Jolay 2010
ESPAINA 3 Aogositra 1961
SOEDA 28 Septambra 1961
SOISA 28 Septambra 1961
VORONTSILOZA 2 Aogositra 1961
FANJAKANA MITAMBATRA 2 May 1961
ETAZONIA 12 Aprily 1961
Ny filohan'ny filankevi-pitantanana Afrikana Cuthbert Ncube dia nandefa tao amin'ny vondrona WhatsApp omaly:
Arahaba ry mpiara-miasa. Mivavaka izahay mba ho salama daholo noho ny Fahasoavany. Tsikaritray tamin'ny fahadisoam-panantenana sy rikoriko tanteraka ny fihetsik'i Eoropa sy ny hafa mba hampitoka-monina an'i Afrika. Efa nampoizina hatry ny ela izany satria nanakoako hatrany ny fitovian-jo izay naharitra am-polony taona maro. Raha nisy fotoana niraisan’ny rehetra, dia izao, ho an’i Afrika, ny hametraka ny ezaka rehetra ataontsika ho fanatsarana ny fiaraha-monina sy ny olom-pirenentsika.
Ny valin-teny momba izany dia ahitana andian-teny: Hajao Andriamatoa Filoha, tsy maintsy mitsangana sy mijoro ary miaro ny tanindrazantsika isika.
Namaly izany ny Profesora Geoffrey Lipman ao amin'ny SunX any Bruxelles:
Ry namana malala avy any Afrika: Manoro hevitra aho fa ilaina ny manatona ity zava-misy Omicron vaovao ity miaraka amin'ny lojika tony, fa tsy ny fihetseham-po azo takarina fotsiny.
Voalaza fa nisy mpandeha 60 voan'ny aretina tamin'ny fiaramanidina KLM avy any Capetown mankany Amsterdam tamin'ity herinandro ity. Ny karazany vaovao dia mety handà ny fiarovana ny vaksiny ankehitriny. Eo am-panandramana izany ary andro voalohany amin'izany dingana izany. Tsy avy amin'ny fihetseham-po manohitra ny Afrikana no ezahan'ny manampahefana any Eoropa hanakatona ny banga. Satria mety ho lavaka mahafaty amin'ny paikady fototra fiarovana ny olom-pirenena izany.
Tokony hiara-mientana amin'ny vondrom-piarahamonina Iraisam-pirenena isika (anisan'izany ny indostria ara-bola sy fiantohana) ho an'ny Tahirim-bola lehibe ho an'ny fanonerana ny fizahantany mba handrakofana izany sy ireo hetsika mandrahona ara-pahasalamana ho avy.
Nanampy i Wolfgang Koening avy any Alemaina:
Ary efa ela be ny nandatsaka ny patanty momba ny vaksiny mba hanomezana fahafahana ny Afrikana rehetra hanao vaksiny sy hisorohana ireo variana vaovao tsy hipoitra.
Kalo Africa Media avy any Nizeria namoaka hoe:
Miresaha amin'ny fametahana marika diso fa tsy mieritreritra fa tsy mila izany isika. Mila miteny isika!
Heverinao ve fa hangina izy ary hijery ny fireneny amin'ny anarana diso[ed]? Ny faritra atsimon'i Afrika manontolo no resahinay. Tsy mampihomehy. Heverinao ve fa mora i Shina? Amin'ity tranga ity, tsy nisy porofo ara-tsiansa hamaritana ny maha-origin'ny OMICRON, saingy nanatsoaka hevitra izy ireo fa Afrika. Araka ny hevitrao, mora ve i Botswana tamin'ny voalohany nomena anarana hoe variana Botswana? Mila miteny isika rehetra; fanafihana iombonana amin'ny olombelona izany.
Mpikambana ao amin'ny ATB avy any Zambia namoaka hoe:
Tsy misy mpandresy amin'ny fanakatonana ny sisintany. Toe-javatra very/very ho an'ireo manidy sisintany sy ireo tratran'ny fanakatonana. Ny fomba mandroso dia ny fampiharana sy fanamafisana ny fepetra amin'izao fotoana izao hiatrehana ny fifindran'ny COVID.
Faouzou Deme avy any Sénégal nanampy hoe:
Salama: Ity areti-mifindra ity dia ady mangatsiaka ataon'ireo indostrialy lehibe sy ireo hery lehibe eoropeanina sy amerikana mba handravana an'i Afrika noho ny tombontsoany manokana. Anjarantsika ny mandinika sy manomana forum stimulus ho an'ny fizahantany afrikanina (sub-region) momba ny fomba fanjifantsika ny vokatra fizahan-tany ho an'ny mponina eo amin'ny sehatra nomerika sy ny hafa. Ity no tolo-kevitro manokana. Inona ny hevitrao?
Nilaza ny filoha Cyril Ramaphosa ao Afrika Atsimo omaly:
Nandritra ny fotoana ela, ireo firenena Afrikana dia nanofana ny fijeriny momba ny varotra sy ny fampiasam-bola amin'ny tsena any ivelan'ny kaontinanta, toa an'i Eoropa, Azia ary Amerika Avaratra. Tonga ny fotoana hanatonana akaiky kokoa ny trano.
Nanolo-kevitra ny World Tourism Network:
Raha jerena fa ny otrikaretina Omicron an'ny COVID-19 dia fantatr'ireo mpahay siansa mpikaroka ambony any Afrika Atsimo, ary nampandre avy hatrany ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana sy ny Filankevitry ny Fahasalamana Maneran-tany ny firenena, tamin'ny fampiasana ny fomba iraisam-pirenena nifanarahana eran-tany, dia zava-dehibe ny tsy manome ny fahatsapana fa firenena manao izay andrasana amin'izy ireo amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena, dia midika fa tokony hosokajiana ho firenena izy ireo, ary tsy hanasazy an'io firenena io amin'ny fitokanana; SY
Raha jerena fa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny OMS fa tsy hanampy amin'ny fampitsaharana ny fihanaky ny viriosy ny fandrarana ny fitsangatsanganana; SY
Raha jerena fa na dia eo aza izany torohevitra izany, ny governemanta OECD maro dia nametraka tsy an-kanavaka toy izany ny fandrarana ny fitsangatsanganana any amin'ireo fanjakana afrikanina tatsimo.
Raha jerena fa nisy fiantraikany ara-bola mivantana azo refesina eo amin'ny sehatry ny Fitantanam-paritany sy fizahan-tany any amin'ireo firenena Afrikana Tatsimo ireo ary noho izany ny toe-draharaha ara-tsosialy sy ara-toekarena ary fampandrosoana,
Ny World Tourism Network dia miantso ireo firenena tompon'andraikitra amin'ny OECD mba hanangana Tahirim-bola iraisam-pirenena hanonerana ny sehatry ny Travel & Tourism amin'ireo firenena Afrikana ireo, araka ny nohamarinin'ny Banky Fampandrosoana Afrikana, ary hitazona izany famatsiam-bola izany amin'ny ambaratonga ilaina mandra-pahafoana ireo fandraràna ireo.
Indrisy anefa, ny zava-nitranga tamin'ny faran'ny herinandro dia toa nisy marika i Afrika Atsimo sy Botswana.
Mandra-pahatongan'izany, fantatray fa efa tany Belzika, Alemana, UK, Canada ary Hong Kong ny tebiteby vaovao, ary mandeha. Nanidy ny sisin-taniny tamin'ny vahiny rehetra i Japana sy Israely. Lavitra lavitra an'i Afrika Atsimo izany.
Ny zava-misy fa tsy manana fitaovana hanaovana vaksiny ny rehetra i Afrika dia mety ho nahatonga ny fiovan'ny viriosy vaovao. Ny World Tourism Network dia niantso torolàlana vaovao momba ny fomba fitsangatsanganana miaraka amin'ny COVID-19 ary mitazona ny sisintany sy ny toekarena misokatra.
Nisy fiatraikany ara-bola mivantana azo refesina hatrany amin'ny sehatry ny Fitantanam-paritany sy fizahan-tany any amin'ireo firenena afrikanina tatsimo ireo ary noho izany ny toe-karena ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ny fampandrosoana.
Androany, nahazo antso avy amin'ny firenena afrikanina izay tsy tokony ho tratran'ny tebiteby vaovao ny WTN. Nilaza tamin'ny WTN ny mpandraharaha mpitety faritany iray any Ogandà fa nahazo fanafoanana faobe avy amin'ireo mpandeha amerikana izy ireo. Hita fa efa voasokajy daholo izao i Afrika, ary tsy hijanona eto izany.
Tsindrio eto ny fanangonan-tsonia
Ny Tambajotran'ny Fizahantany Maneran-tany dia miantso ny famatsiam-bola hametrahan'ny firenena OECD
The Tambajotra fizahan-tany manerantany Noho izany, dia miantso fanohanana ny sehatry ny fizahantany afrikanina tatsimo voakasika mivantana noho ny fepetra nataon'ny fanjakana OECD sasany amin'ny fampitsaharana ny serivisy an-habakabaka izay nifanarahan'ny roa tonta.
Manome soso-kevitra ho an'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany ny WTN mba hamahana ity olana ity miaraka amin'ny minisitry ny fizahantany afrikanina, miaraka amin'ireo filoham-panjakana afrikanina, miaraka amin'ny EU, Etazonia, UK, ary Japon.
Ny World Tourism Network dia hanohana ny antso hanonerana ny sehatry ny Travel & Tourism amin'ireo firenena afrikanina ireo, araka ny nohamarinin'ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana. Miantso ny WTN hitazona ny Tahirim-bola ho an'ny fanonerana ny fizahantany amin'ny ambaratonga ilaina mandra-pahafoana ny fandrarana toy izany.